ဘိလပ်မြေထမ်းပြီး တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မိန်းကလေး
သင့်ရဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကို ဖော်ပြနေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း (၁၁)မျိုး
Lee Kwang Soo ပြောပြတဲ့ BLACKPINK Member တွေထဲက ချစ်စရာကောင်းပြီး အလှဆုံး member….
မော်ဒယ်လ်တွေကို အရှက်ရစေလောက်အောင် ထူးခြားပြောင်မြောက်လွန်းတဲ့ Rover ရဲ့ ဖက်ရှင်များ
နေ့တိုင်း Journal ရေးတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ဘဝမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာမလဲ?
ကျယ်လောင်စွာ ရယ်မောခြင်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး (၆)မျိုး
ညမအိပ်ခင်မှာ မဖြစ်မနေပြုလုပ်သင့်တဲ့ Skin Care နည်းများ။
တစ်နာရီတည်းနဲ့ ဟင်းပွဲများစွာကို ချက်ပြီး စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကီရာလာမှ ၁၀နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး
စိတ်ဖိစီးမှုတွေ အရမ်းများနေတဲ့အခါ ပြုလုပ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်း ၇ ချက်
ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ လူတွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အချက်အလက်များ
အိုမင်းခြင်းရင့်ရော်ခြင်းကို လျော့ချပေးတဲ့ သောက်သုံးစရာများ
မိသားစု စားဖို့နေရေးအတွက် ဘဝကိုရုန်းကန်နေရတဲ့အချိန်မှာ အချို့အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ရှင်က ကိုယ့်အပေါ်ခေါင်းပုံဖြတ် လက်ဝါးကြီးအုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေလေးနဲ့ အလုပ်မရမှာ ကြောက်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အပေါ် အနိုင်ကျင့်ခြယ်လှယ်နေတာကို သိသိကြီး ခေါင်းငုံ့ခံနေရတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနည်းနဲ့အများရှိနေပါသေးတယ်။ ဒီအထဲမှာတော့ အခုတရုတ်က ဘိလပ်မြေထမ်းတဲ့ အမျိုးသမီးလေးလည်း အပါအဝင်ပါပဲ။
သူဟာ ယောကျ်ားလေးတွနဲ့ တန်းတူး ဘိလပ်မြေထမ်းတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ငယ်ရွယ်လှပတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံစံအနေအထားက သာမန်မိန်းကလေးတွေလို နူညံ့မယ်ထင်ထားပေမဲ့ သူမဟာ သန်မာပြီး ဇွဲရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။
မိသားစုကို ထောက်ပံ့နေရသူဖြစ်တာကြောင့် မရှိ ရှိတဲ့ ဒီဘိလပ်မြေထမ်းတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ မိဘတွေက အသက် ၄၀ကျော်မှ သူမကို မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ မိဘတွေက အသက်အရွယ်ကြီးလာခဲ့ပါပြီး။ ဒါ့ကြောင့် သူမရဲ့ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ကောင်းကောင်း အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
အဲ့ဒီအခါ သူမအတွက် မိဘတွေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်အောင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ သူမမှာ ဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကရတဲ့ ပိုက်ဆံဟာ သူမကျောင်းတက်တဲ့အခါ အသုံးပြုဖို့ အသုံးစရိတ်နဲ့ မိဘတွေ နာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါ ထောက်ပံ့ဖို့ရယ်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန်မိန်းကလေးတစ်ယောက် မလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်မျိုးကို သူမလုပ်ခဲ့ပြီး သူမပုံကို ကြည့်ရင်တော့ အမြဲ ဘိလပ်မြေမှုန့်တွေ ပေပွနေတာကို တွေ့ရမှာြဖစ်ပါတယ်။ သူမနဲ့ တန်တူရွယ်တူ မိန်းကလေးတွေကို တွေ့တဲ့အခါ သူမအဖြစ်ကို သူမကြည့်ပြီး မျက်ရည်ကျဖူးတဲ့အချိန်တွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမဘွဲ့ရပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ အလုပ်လေးနဲ့ သူမရဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တိုးတက်ဖို့ ဆန္ဒရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အိပ်ချင်နေတဲ့ တက္ကစီဒရိုင်ဘာအဘကို ပေးအိပ်ပြီး သူကိုယ်တိုင် ကားမောင်ပေးတဲ့ ခရီးသည်မလေး
ဘိလပ္ေျမထမ္းၿပီး တကၠသိုလ္ ဆက္တက္ရတဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံက မိန္းကေလး
မိသားစု စားဖို႔ေနေရးအတြက္ ဘဝကို႐ုန္းကန္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ အခ်ိဳ႕အလုပ္သမားေတြကို အလုပ္ရွင္က ကိုယ့္အေပၚေခါင္းပုံျဖတ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပုံမွန္ဝင္ေငြေလးနဲ႔ အလုပ္မရမွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္အေပၚ အနိုင္က်င့္ျခယ္လွယ္ေနတာကို သိသိႀကီး ေခါင္းငုံ႔ခံေနရတဲ့ အလုပ္သမားေတြ ကမၻာေပၚမွာ အနည္းနဲ႔အမ်ားရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီအထဲမွာေတာ့ အခုတ႐ုတ္က ဘိလပ္ေျမထမ္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေလးလည္း အပါအဝင္ပါပဲ။
သူဟာ ေယာက်္ားေလးတြနဲ႔ တန္းတူး ဘိလပ္ေျမထမ္းတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ငယ္ရြယ္လွပတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပုံစံအေနအထားက သာမန္မိန္းကေလးေတြလို ႏူညံ့မယ္ထင္ထားေပမဲ့ သူမဟာ သန္မာၿပီး ဇြဲရွိတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ။
မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ေနရသူျဖစ္တာေၾကာင့္ မရွိ ရွိတဲ့ ဒီဘိလပ္ေျမထမ္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ သူမရဲ့ မိဘေတြက အသက္ ၄၀ေက်ာ္မွ သူမကို ေမြးဖြားခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူမအရြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ မိဘေတြက အသက္အရြယ္ႀကီးလာခဲ့ပါၿပီး။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူမရဲ့ မိဘႏွစ္ပါးစလုံး ေကာင္းေကာင္း အလုပ္မလုပ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီအခါ သူမအတြက္ မိဘေတြ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေအာင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ သူမမွာ ဒီအလုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ကရတဲ့ ပိုက္ဆံဟာ သူမေက်ာင္းတက္တဲ့အခါ အသုံးျပဳဖို႔ အသုံးစရိတ္နဲ႔ မိဘေတြ နာမက်န္းျဖစ္တဲ့အခါ ေထာက္ပံ့ဖို႔ရယ္အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
သာမန္မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ မလုပ္နိုင္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးကို သူမလုပ္ခဲ့ၿပီး သူမပုံကို ၾကည့္ရင္ေတာ့ အျမဲ ဘိလပ္ေျမမွုန္႔ေတြ ေပပြေနတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူမနဲ႔ တန္တူရြယ္တူ မိန္းကေလးေတြကို ေတြ႕တဲ့အခါ သူမအျဖစ္ကို သူမၾကည့္ၿပီး မ်က္ရည္က်ဖူးတဲ့အခ်ိန္ေတြလည္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူမဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့အခါမွာေတာ့ ဝင္ေငြေကာင္းတဲ့ အလုပ္ေလးနဲ႔ သူမရဲ့ မိသားစုဘဝေလးကို တိုးတက္ဖို႔ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
Quarantine ကာလအတွင်း ခေါင်းအုံးဖက်ရှင် Challenge မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ(၉) ပုံ
ရိုးရိုးသားသားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ Stay Home ရင်း ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပျောက်ဆုံးနေကြပါတယ်။ ဒါကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပါ။ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ အွန်လိုင်းမှာအချိန်ဖြုန်းနေတာထက် ကိုယ်ဟာ အရင်လိုပဲ အလုပ်များနေတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ် အွန်လိုင်းမှာ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေလုပ်ရင်လည်း အချိန်တွေကို...
အသက် (၁၀၃) နှစ်ပြည့်မှ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ပထမဆုံးတက်တူးထိုးလိုက်တဲ့ အဘွားအို
အသက်ဆိုတာကိန်းဂဏန်းမျှသာဆိုတဲ့ စကားအတိုင်းပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ အသက်အရွယ်ကို ပဓာနမထားဘဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထူးချွန်အောင်မြင်နေသူတွေရှိသလို အသက်ကြီးကာမှ ငယ်မူငယ်သွေးပြပြီး “ငါမအိုသေး” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ စွမ်းဆောင်ပြနေသူတွေရှိပါတယ်။ အခုလည်း အသက် (၁၀၃) နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အဘွားအို ဒိုရိုသီပိုလက်ခ်က သူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးတက်တူးကို...
ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတာတောင် စူပါမင်းဝတ်စုံနဲ့စတန့်ထွင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်
အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံခဲ့ရပေမယ့် လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ပဲ ပြန်လည်သက်သာလာခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ အိမ်ဖြူတော်ကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Debate ပွဲအပြီးမှာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်တစ်ယောက် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီး ဝါရှင်တန်ရှိ ဝေါ်လ်တာရိဒ်ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်အနေနဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူနေစဥ်အတွင်းမှာပဲ အလုံပိတ်ကားဖြင့်...
BTS အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ V ရဲ့ အပြုံးတွေကို တောက်ပစေနိုင်တဲ့ Girlfriend က ဘယ်သူဖြစ်မလဲ
Army တွေဆိုတာ BTS Band အတွက် အရေးကြီးပြီး တစ်ခုတည်းသောထူးခြားချက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ထပ်တလဲလဲပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Army တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ biases တွေကနေ သံယောဇဉ်တွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအားလုံးကိုလည်း professtional အလုပ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတဲ့အတွက် ၎င်းတို့ကို...